कसरी शुरु भयो को’रोना : कस्ता हुन्छन् ल’क्षण ? कसरी बच्ने ? – ramechhapkhabar.com
कसरी शुरु भयो को’रोना : कस्ता हुन्छन् ल’क्षण ? कसरी बच्ने ?
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगको डाक्टरहरुको लडाई यस्तो भएको छ कि मानौ अपरिचित दुश्मनसंग युद्ध लडिरहेको जस्तो छ ।
अहिलेसम्म विश्वभर २ लाखभन्दा बढी संक्रमित र करिब ९ हजारको मृत्युले अहिले विश्व आतंकित बनेको छ । यस रिपोर्टमा विभिन्न एजेन्सीहरु र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीमा आधारित रहेर कोरोनाको संक्रमणबाट कसरी बच्ने ? लक्षण के के हुन्छन् ? र कोरोना भाइरस के हो ? भन्ने बारे जानकारी दिन खोजिएको छ ।
वेलकम मेडिकल रिसर्च च्यारिटीका निर्देशक डा जेरेमी फरार भन्छन्, ‘यस संक्रमण अझै फैलिने सम्भावना छ, अहिले मानिस बाट मानिसमा संक्रमण नभएपनि पछि भने यो मानव बाट नै फैलिने छ, हामीले चीन र अरु देशमा अझ धेरै संक्रमणको केसको वारेमा सुनेका छौ, यो अझ अरु थुप्रै देशमा पनि फैलिने छ ।’
के के हुन्छन् लक्षण ?